FAMPIANARANA FIAROVANA VAOVAO VAOVAO v2.1 FSX & P3D - Rikoooo
Downloads 45 628
Mpanoratra: mpanoratra voalohany Pablo Diaz, FSX fanavaozana nataon'i Danny Glover sy Erik BENDER (Rikoooo)
Vaovao ! HDE v2.1 (famaritana avo tontolo iainana) sary-zava-misy HD mihasimba fonosana izay hanatsara ny endriky ny rahona (cumulus, stratus, cirrus), loko lanitra sy ny tany antsipirihany.
Fitaovana / fanesorana amin'ny alàlan'ny famenoana sy famerenana ny soratra tany am-piandohana. Miaraka amin'ny mpanafika rehetra miorina amin'ny FSX (Prepar3D ary Dikan-teny amin'ny dite). Version 2.0 ho 2.1 avy amin'i Rikoooo. Tsy toy ny zava-misy mihitsy ny habakin'ny mpanafika ny sidina, mandinika ny rahona amin'ny famolavolana avo, ny tsipiriany bebe kokoa (herbs)